Ukuzikhangelela Indawo Yeholide Eqeshisayo e-Alsace phakathi kweStrasbourg neColmar eMutzig - I-Airbnb
Ukuzikhangelela Indawo Yeholide Eqeshisayo e-Alsace phakathi kweStrasbourg neColmar eMutzig
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGilbert iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu engasemva eAlsace, eMutzig ikwindlu ezimeleyo ezantsi kwegadi. Ilungiselelwe iholide etofotofo yezibini ezinabantwana abayi-1 okanye abayi-2.
Phakathi kweStrasbourg (imizuzu eyi-25) kunye neColmar, ecaleni komzila wewayini kwaye emazantsi eVosges, yindawo efanelekileyo yokutyelela iidolophu kunye neelali zaseAlsace okanye ukunyuka intaba kwiVosges Massif.
Wamkelekile kwi- "Gîte en Alsace" kwiholide yakho elandelayo kuwo onke amaxesha onyaka.
Le ndlu engasemva eAlsace, eMutzig ikwindlu ezimeleyo ezantsi kwegadi. Ilungiselelwe iholide etofotofo yezibini ezinabantwana abayi-1 okanye abayi-2. Phakathi kweStrasbourg (imizuzu eyi-25) kunye neColmar, ecaleni komzila wewayini kwaye emazantsi eVosges, yindawo efanelekileyo yokuqala ukutyelela iidolophu kunye neelali zaseAlsace okanye ukunyuka intaba kwiVosges Massif.
Wamkelekile kwi- "Gîte en Alsace" kwiholide yakho elandelayo nakweyiphi na ixesha lonyaka.
Indawo yokuhlala yakutshanje nenento yonke ukuze ube neholide etofotofo:
- ikhitshi elidityanisiweyo kwi-oven emhlophe,
- umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokuhlamba izitya, izitya ezininzi
nemibalabala, - ioveni ye-pyrolysis, i-microwave oven,
- ipleyiti enamanzi amane, i-excelor hood,
- ifriji enkulu, i-toaster, umatshini wokwenza ikofu, iketile, izitya
ezinemibala, - into eyenza kufudumale ngombane kuwo onke amagumbi,
- indawo yomlilo yamaplanga enendawo yokufaka umoya oshushu kwigumbi ngalinye kwabo bakhetha ukufudunyezwa ngamaplanga,
- i-TV, i-DVD player kunye ne-BlueRay, i-WiFi ye-intanethi, isikhululo sezulu,
- igumbi lokuhlambela eline-shower enkulu, isinki kunye nendlu yangasese
- ifenitshala yegumbi lokulala (iibhedi, isofa, idesika) eyenziwe ngamaplanga aqinileyo, oomatrasi abatofotofo, iingubo ezininzi.
- ii-shutters ezifihlakeleyo kuzo zonke iifestile zegumbi lokulala, ikhitshi nendawo yokungena.
Indlu esemaphandleni ineendawo zokupaka zabucala eziyi-2, amatye amabini, (inetafile nezitulo eziyi-4 egadini kwenye kunye netafile nezitulo ezimbini kwenye), indawo yokoja ye-Weber. Ukufikelela kwigadi engasemva kwendlu esemaphandleni kuvumelekile.
Igumbi lokulala elisemgangathweni linazo zonke iibhedi (ibhedi elala abantu ababini enye i-140 x 90 cm, ibhedi eyi-90 x 190 cm kunye nesofa enokutshintshwa ibe yibhedi eyi-80 x 190 cm).
Indawo yokuphumla: Indawo yokuphumla
ibekwe phezulu kwikona yegumbi apho iibhedi zikhoyo. Inesofa enamagumbi ayi-3, ifenitshala exhasa iTV enezikrini eziyisicaba netafile encinci kwigumbi lokuhlala.
Indawo yeTV iyafumaneka nakumgangatho osezantsi kwindawo yokutyela yasekhitshini ukuvumela abo bakhetha ukubukela iTV ngexesha lokutya kwabo kodwa akukho sofa okanye isitulo kule ndawo yokutyela yasekhitshini.
Ikona yeofisi: Ikona yeofisi ifumaneka phezulu, kwikona
yegumbi apho iibhedi zikhoyo. Inedesika yamaplanga eqinileyo, isitulo kunye nesibane sedesika.
Indawo kunye nokuchayeka:
Indlu esemaphandleni isemaphethelweni edolophana yaseMutzig. Ngasemva kwendlu esemaphandleni, igadi endala ye-900 m2, emva koko iqala induli egqunywe ziinduli, izidiliya, ihlathi, evumela ukuhamba ngeenyawo kufutshane nendlu esemaphandleni. Iilali ezikufutshane yiMutzig, iMolsheim neObernai.
Izinto ezenziwayo ezikufutshane :
- tyelela iilali ezintle zaseAlsatian (kuquka iObernai ekwi-12km, iRiquewihr, iEguisheim, iKaysersberg, iRibeauvillé, iHanawihr,...);
- ukutyelela kweStrasbourg neColmar;
- ukufumanisa iAlsace Wine Route kumantla nakumazantsi endlu;
- ukuhambahamba nokunyuka iintaba zaseVosges;
- ukutyelela kweemarike zeKrisimesi;
- i-cross-country okanye i-alpine skiing kwi-Vosges (imithambeka emalunga ne-32 km);
- ukutyelela iinqaba (Haut Koenigsbourg, Wangenbourg,...);
- ukutyelela iipaki zezilwanyana (ii-storks kunye ne-otters e-Hanawihr, intaba yeenkawu, i-volerie yeeagles);
- tyelela ipaki enkulu yokuzonwabisa (iEuropa PARC) ekumgama oziikhilomitha eziyi-40;
- fumana ukutya kwaseAlsatian kwiivenkile zokutyela ezicetyiswayo ngokwezinto ozifunayo.
- ipuli yangaphakathi kwiikhilomitha eziyi-2;
- iivenkile zokutyela eziyi-1.5km;
- iivenkile ezinkulu
eziyi-1.5km neekhilomitha eziyi-4 - iivenkile, oogqirha, amayeza, oogqirha bamazinyo eMutzig (1.5km)
- Isikhululo i-Mutzig ter imizuzu eyi-7 xa uhamba ukusuka kwindlu esemaphandleni (kulula ukuya kwimizuzu eyi-22 ukuya eStrasbourg ter okanye ufike kwindlu esemaphandleni ngololiwe).
Indawo yokuhlala ethe cwaka ekupheleni kwedolophana yaseMutzig. Ngasemva kwendlu esemaphandleni kukho igadi yethu emalunga ne-900mwagen emva koko ezinye ii-orchards onokuhamba kuzo. Indawo esembindini welali ikude ngeekhilomitha eziyi-1.5. Kukho iivenkile ezininzi kunye noogqirha, oogqirha bamazinyo, amayeza. Ipuli yokuqubha engaphakathi ikumgama weekhilomitha eziyi-2,5 ukusuka kwindlu esemaphandleni. Ukusuka kwindlu esemaphandleni ungafikelela kwisidiliya saseDorlisheim kwimizuzu eyi-15 uhamba ngeenyawo ukuze uhamba ngeenyawo kwimidiliya.
Nous sommes de jeunes retraités qui ont ouvert ce gîte en 2005 dans une petite maison indépendante au pied de notre verger. D'abord prévu pour recevoir notre famille lors de leurs…
Ngokuqhelekileyo sikhona ukuze sikucebise xa utyelela indawo yethu entle yaseAlsace. Uza kufumana amashiti ethu eengcaciso kwindlu esemaphandleni ukukunceda ulungiselele uhambo lwakho.